Ikhishi lezitini: indlu nje enhle kakhulu noma isakhiwo esinamandla ngempela? Uma othile engabaza ngokuthi lokhu kuyinqaba yangempela, ake sikhumbule inganekwane ngezingulube ezintathu. Ngempela, kwakuyindlu yesikitini, hhayi yokhuni, futhi ngisho nangaphansi utshani obuncane, kulondolozwe izingulube ezimpisi embi. Uma sicabangela ukuthi le ndaba ingakanani, sekucaca ukuthi isitini sasiyigugu ngaphambi kokuba sizalwe nawe. Namuhla, lapho ubuchwepheshe wokwenza izitini kukuvumela ukuba wenze ukukhanya, ukufudumala nokuhlala isikhathi eside, izindlu zezitini zinikeza ukuthembeka okuphelele nokududuza iminyaka eminingi.
Umsebenzi wokwenza izindlu zezitini afudumele uhamba phambi kwazo zonke izitshalo zezitini. Ezimweni zokuncintisana okunzima, wonke amabhizinisi anesithakazelo ekukhiqizeni izitini eziphezulu nezakhiwo ezishisayo. Isitini esinjalo sibizwa ngokuthi "ngempumelelo". Kungani izitini "eziphumelelayo" zifudumele? Lokhu kuchazwa ngokungabi nalutho, okufinyelela ku-45% wevolumu yayo. Kungenxa yalezi zivalo ukuthi umoya ugcinwa, okuyi-insulator ephakeme kakhulu yokushisa. I-voids inamajamo ahlukene: nxazonke, emaceleni, kodwa uma amafomu enhle - spherical, isitini sibhekwa njengendlela ephumelelayo kakhulu. Isitini esinjalo sinesibindi, kuyashisa ngisho nokushisa kunokugqama nokukhanya okuningi. Izakhiwo ze-thermotechnical zezitini ezinamandla ezisebenza kahle zidlula ngisho nezinkuni, futhi kulula ukubeka, ikhono lokwenza izindonga zibe mncane, umthwalo ophansi esakhiweni futhi ungenzeki kahle ekwakhiweni.
Nakuba izitini "eziphumelelayo" liphezulu, kudinga ukubhekana nokunikeza isakhiwo ubuhle bokubukeka. Yisitini esibhekene naso esinika indlu ukubukeka okuphelile kanye nobuhle obushiwo ekuqaleni. Namuhla, abakhiqizi banikeza ukukhetha okubanzi kokubhekene nezitini ezinhlobonhlobo zemidwebo nemidwebo. Ngenxa yezinto ezihlobisa izitini ezinjalo ezisetshenziselwa ukuqedela amakholomu, amacembe, izindawo zomlilo. Kukhona olunye uhlangothi lwemali. Izitini ezibhekene nazo zincane kakhulu. Kodwa, njengoba bethi, ubuhle kudinga ukuzidela. Futhi ukuthi lezi "izisulu" azibalulekile, ukuthutha izitini ezibhekene nezidakamizwa kudinga amaphakheji enkolo.
Naphezu kwezinzuzo zokubeka izitini , kunezimo ezibucayi eziphakama ezindaweni lapho isitini senziwa khona ngamakhasimende. Ekwakheni i-slang kuthiwa yizibhuloho ezibandayo. Lezi bhuloho ezibandayo zivimbela ukwakhiwa kwesithathu kokushisa, okungaholela ekubunjweni kokunciphisa, umswakama, ukuphahlaza nokufucuza. Kodwa uDeveli akasabeki kakhulu njengoba eqoshiwe. Umklamo okhethiwe ngokukhethwa ngokucophelela kanye nokugxila okushisayo kwale "mabhuloho" kunciphisa ukulahlekelwa ukushisa.
Enye insindiso evela kule nkathazo is sandwich, lapho igebe lokushisa lokushisa elenziwe phakathi kwemigqa emibili yokugcoba igcwele izinto eziphakeme zokushisa ezishisayo. Namuhla, ukugxila kwangaphandle kwezindonga ezithwala imithwalo kuyathandwa kakhulu , ehlanganiswe ne-plaster ukuvikela emiphumeleni emibi yezimo zezulu. Udonga olunjalo luyanciphisa ukushisa kokushisa, futhi lusebenza njengesivinini se-air and steam.
Manje ake sizame ukuhlanganisa konke okushiwo ngenhla, ukuhlela izinhlangothi ezinhle nezingafanele zezitini ekwakhiweni kwezindlu namakamelo.
Okokuqala, masihlale sibhekene nezici ezinhle zezindlu zezitini namahishi:
1. Amandla angenakuphika nokuqina kwezindlu zesikitini.
2. Indlu yezitini imelana nomlilo.
3. I-microclimate evelele, indlu yezitini "iphefumula".
4. Izindlu zezitini zinikeza umsindo omuhle kanye nokugxila okushisayo.
5. Izindlu zezitini ziphikisana nezinguquko ezimweni zesimo sezulu.
6. Ngenxa yezinhlobonhlobo zezitini kanye nezakhiwo zayo zokuhlobisa, izinhlobo ezahlukene zokwakhiwa kwezindlu zezitini kungenzeka.
7. Izindlu zezitini azikho ngaphansi kwemiphumela emibi yesikhunta, i-fungus, izinambuzane.
8. Izindlu zezitini zithinteka kalula ekugcineni kokugcina: ukubeka, ukudweba.
9. Ubuhle kanye ne-aesthetics yezindlu zezitini.
Uhlu lwezici ezimbi akuyona into emangalisayo, kodwa kunjalo. Okokuqala, lokhu kuyisifiso sabangane, kodwa ngokujulile, ukuphazamiseka okuyinhloko kokwakhiwa kwezindlu zesikitini yi:
Izindleko eziphezulu zezitini, ezokuthutha kanye nomsebenzi;
2. Isidingo sokwesekwa okungeziwe ngezinto zokushisa ezishisayo.
Njengoba ubona, indlu yesikitini ayiyona injabulo eshibhile. Ngakho-ke, uma ukhathele uhlobo olufanayo lwekhonkritsi-amabhokisi ebhodlela, emaqenjini angenasici kanye namalungu asabekayo phakathi kwabo, kuzodingeka ukhiphe. Yebo, ukutshala izimali ekwakheni indlu yesikitini akuyona encane. Kodwa akuyona ubuthongo obunokuthula, ngaphandle kwemizwa esabekayo mayelana nemililo, izintaba, amaqhwa, "izinambuzane ezidla izinkuni" ezibiza ngaphezulu?
Cabanga ukuthi unqume ukujoyina abanenhlanhla izindlu zezitini. Umbuzo uvele ngokushesha: kanjani ukwakhiwa? Uma imfundo ikuvumela, ungaqala ukuthuthukisa iphrojekthi yakho, kodwa kungcono ukuphendukela kochwepheshe, inzuzo yezinkampani zokwakha manje iningi. Lapho uzonikezwa ukuba ucabangele inombolo enkulu yejwayelekile, okushoyo, izindlu zendabuko zezitini, kodwa futhi zingakha iphrojekthi eyingqayizivele ngokucabangela izifiso zakho. Ngakho-ke, kufanelekile ukunaka amaphrojekthi ezindawo zokuqasha izitini zasendlini, zinezinto ezilula, futhi izindonga zincani, kodwa ukuklama kuyathandeka kakhulu. Intengo yokwakhiwa kwezindlu zesikitini ihlukahluka kuye ngokuthi indlela yokwakhiwa kanye nezinto ezibonakalayo, kodwa ukwanda kwentengo kuhlala njalo.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ukwakhiwa kwendlu yezitini kuyinkimbinkimbi nenqubo yesikhathi eside, ngakho kuzomele ube nesineke. Ngokwejwayelekile, futhi hhayi ikakhulukazi ukungena emininingwaneni, singakwazi ukuhlukanisa izigaba ezilandelayo zokwakhiwa kwendlu yezitini:
1) geology kanye nomklamo;
2) isisekelo sokubeka;
3) ukukhetha ukugxila kanye nokwakhiwa kwendlu yezitini;
4) ukudalulwa kwangaphakathi;
5) ukuhlinzeka kagesi, amanzi, ukuthuthwa kwamanzi;
6) ukuqedela okwengeziwe, uma kunesidingo.
Uma ungenayo isikhathi esanele, ungazikhawulela esakhiweni senkundla eyodwa. Ngenxa yesidingo esikhulu sezindlu ezinjalo, kunezinketho eziningi zokwakhiwa kwazo. Lokhu kubangelwa ukugcinwa okukhulu ngesikhathi nesikhathi semali. Ngakho-ke, uqaphele, ngubani owaziyo, mhlawumbe indlu yakho izofakwa kulolu khathalogi "Izindlu ezinhle zezitini eMoscow".
I-Foam-samente "Makroflex" (Makroflex): izici, isicelo
Ukubalwa kwe-rafter system: izigaba zenqubo
Hlobisa ekhaya lakho. Indlela yokwenza Decoupage ibhethri ngokwami?
Ukuhlukaniswa kwekamelo zibe izingxenye ezimbili: imfashini, isitayela futhi ilula